Fampahalalana… mila atao totoafo | NewsMada
Fampahalalana… mila atao totoafo
Par Taratra sur 11/01/2022
Tena mbola ao anatin’ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 tanteraka izao. Vao mainka aza mila atao mafimafy no ho ny efa natao sy vita izany. Nahoana? Sarotsarotra ny tena zava-misy sy izay iainana amin’izao; eny, na mihena aza, ohatra, ny isan’ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsimokaretina Conoravirus.
Amin’izany, hafahafa be ihany ny endrika isehony sy ny karazany: mahalala fofona sy tsiron-kanina ihany, ohatra, ny marary, saingy vizana be avy hatrany; tsy sempotra na mikohoka fa marary tenda… Karazana Delta ve izany? Na sanatria Omicron… Mila fanazavana mba tsy ho tompon-trano mihono amin’izay mety mamono ny vahoaka.
Eny, na eo koa aza ny fihenan’ny isan’ny marary ao anatin’ny fahasarotana. Toy izany koa ny hoe fihenan’ny isan’ny marary mamoy ny ainy. Na izany aza, mitombo kosa ny isan’ny faritra tratran’ny valanaretina. Faritra iray amin’ny 23, i Bongolava, sisa no hoe tsy tratra. Hanao ahoana? Tsy fantatra be ihany izay mbola mety ho tohiny.
Aleo malina ihany? Nefa misy ihany no tsy miraharaha: tsy miaro tena sy ny hafa amin’ny fanajana ireo fepetra sakana tsy ahazoana sy tsy iparitahan’ny aretina. Toy ny hoe tsy misy inona iny. Tsy ampy ny fampahafantarana ny tena zava-misy? Na misy mihevitra fa efa mahazatra izay aretina… Nefa hafa be izao andiany fahatelo izao.
Laingalainga, mety mbola misy mihevitra fa fifanatrehana amin’ny mpitondra izao ady amin’ny valanaretina izao? Na fifandraisana amin’ny mpitondra no itondrana ny raharaha… Tsy ampy na tsy ahoana ho azy izay hoe fahamailoana amin’izany? Nefa hoe fahavalo iombonana, tsy hita maso, tampoka tsy ampoizina, tsy mifidy olona…
Mila ezaka manokana ny fanentanana amin’ny fitandroana sy fitandremana fahasalamana, ny fampahalalana ny zava-misy… Maninona? Na hiverina amin’ny fampitandremana sy fanasaziana aza. Ny tsy fitandremana kely ataon’ny vitsivitsy no ndeha hitera-doza lehibe ho an’ny maro? Mila atao totoafo ny fampahalalana ny ady.